Mere Magento ji aga n'ihu na-eduzi Ecommerce CMS Industry | Martech Zone
Saturday, January 17, 2015 Sunday, Jenụwarị 18, 2015 Douglas Karr
Saịtị Ecommerce na-abụbu itinye ego ma chọọ itinye ego na naanị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ nwere ike imeli. Dika otutu ndi ahia na azuta na ntaneti, ndi na ere ahia na anogide ihu na odida na nleta ulo ahia - ya mere o di nkpa ka ha wulite onu ahia ha ma nwaa iweghachi oke ahia.
Ezie na e nwere ụfọdụ nnukwu nyiwe si n'ebe na ikpokọta Bochum, ala-nke-ojiji, ọrụ na ọbụna n'ókè nke ahịa usoro… imerime ndị na-ere ahịa dị elu Magento dị ka CMS ecommerce ha. Dị ka ebe ndị ọzọ na-emepe emepe, Mbipụta Obodo Magento ejirila nnukwu netwọk nke ọrụ, imewe, mmepe na ntinye ihe na-ewu ewu.
Magento na-agbanwe agbanwe iji gboo mkpa gị niile pụrụ iche ma soro gị na-eto mgbe niile site na nchịkọta mgbakwunye ya. E nwere ọtụtụ puku ndebiri na isiokwu iji jazz na ebe nrụọrụ weebụ Magento na Magento Extensions iji nyere aka na ebe nrụọrụ weebụ gị gbasaa ya. Mpempe akwụkwọ Community bụ maka mmezi nke usoro isi; ebe Enterprise mbipụta nwere ihe atụmatụ na arụmọrụ ma ọ bụ free ma ọ bụ bụ na-emeghe ka mgbanwe nke isi usoro.
BestPlugins.com mepụtara infographic a na uru 16 na atụmatụ nke iji Magento. Ha na-enyekwa ụfọdụ nghọta ọzọ na ha na saịtị na steeti ụlọ ọrụ Ecommerce CMS.
Tags: ihe kacha mmanke kacha mmaCommerceecommerceụlọ ahịa cmsmagento
Jan 26, 2015 na 11: 27 AM
Ọ ga-amasị m ekwenyeghị. Nke a bụ stats sitere na BuiltWith gbasara ojiji ecommerce na ịntanetị niile: http://trends.builtwith.com/shop
Ma ọ bụ ka ebipụ ya ozugbo na nsonaazụ ya, nke a bụ nseta ihuenyo site na 1/26/15: http://danielsantoro.com/files/randshare/usage-statistics.png
Ike Magento 9.94% nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị niile… ike WooCommerce 17.77%, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ okpukpu abụọ. O doro anya na Magento abụghị 'na-eduga ụlọ ọrụ', ebe ahịa ahịa ha na-aga n'ihu na-ebelata ka WooCommerce na-aga n'ihu na-eto eto.
Dị ka akụkụ ederede, m na-atụ egwu popups na popovers mgbe m na-ede nke a - Ekwesịrị m imechi windo anọ dị iche iche ruo ebe a, yabụ ị nwere ike gbanyụọ ụfọdụ plugins ahịa. Ọ bụghị UX dị mma.
Jenụwarị 26, 2015, elekere 1:34 nke abalị
Daalụ maka ozi, akụrụngwa na nzaghachi Danny! Ma nwute maka mpụta mpụta - amachaghị ihe mere eme mana agbanyụrụ m ha niile.
Jenụwarị 26, 2015, elekere 9:41 nke abalị
Nwa nwoke WooCommerce nwere naanị 3.x% òkè, chere ebee ka i nwetara onyonyo nseta
Jenụwarị 28, 2015, elekere 7:00 nke abalị
@Krish - gbanwee nhọrọ gị ka ọ bụrụ "Internet niile".
Mee 8, 2015 na 9: 35 AM
Daalụ maka ịnye ọnụ ọgụgụ ụgha. Nke a bụ ihe mkpofu. Magento na-aga ịnwụ, WooCommerce na-ebuga eCommerce gaa n'ọkwa ọzọ, enwere m ike ịgwa gị nke ahụ n'ihi na m rụrụ ọrụ na ihe dị ka narị ọrụ Magento/Presshop/WooCommerce.
Mee 8, 2015 na 1: 01 PM
Ndewo freeeeeeee, ọ ga-adị mma ịkọrọ ọnụ ọgụgụ dị iche. Nyefee ha site na saịtị anyị ma anyị ga-enweta ọkwa!